Ukufana kwe-16.5 ngoku kuyahambelana neApple Silicon kwaye kuyakhawuleza kakhulu | Ndisuka mac
Ukufana 16.5 sele ixhasa iApple Silicon kwaye ikhawuleza kakhulu
Siyaqhubeka neenkqubo ezihambelana neprosesa entsha ye-Apple. Nge-Apple Silicon inguquko yeza kwiiMacs zenkampani kwaye kancinci kancinci abaphuhlisi benza ukuba izicelo zabo zihambelane nale processor kunye ne-M1 chip. Uvavanyo luhlala lubonisa ukuba le processor yenza ikhompyuter ikhawuleze, ikhuseleke kwaye isebenze ngakumbi. Ngoku kufana nokujika okungu-16.5
Abasebenzisi beMac M1 ngoku banendlela entsha yokwenza iWindows isebenze koomatshini babo. Iphehlelelwe ngokusesikweni Ukufana 16.5 kunye nenkxaso yemveli yeApple Silicon, Ukuvumela abasebenzisi ukuba basebenzise windows I-10 ARM Insider Preview kwii-M1 macs. Akukho sidingo sokusebenzisa iRosetta.
Xa uhlobo lwe-beta lwalusungulwa, amawaka wabasebenzisi avavanya ubuhle bayo obutsha kwaye, ewe, iziphumo azinakuba ngcono. IVP yobunjineli kunye neNkxaso, UNick Dobrovolskiy uthe:
Sifumene uphononongo olukhulu ngokusebenza okumangalisayo kokubona kwangaphambili kobuchwephesha Ukufana 16.5 kwi-M1 Mac kwaye Windows 10 kwi-ARM Insider Preview njenge-x86 ii -apps kunye nemidlalo, kubandakanya iRocket League, phakathi kwethu, iRoblox, i-Elder Scrolls V: i-Skyrim, iSam kunye noMax Gcina ilizwe kunye nabanye abaninzi. Abavavanyi bathande inkqubo ekulula ukuyisebenzisa kwaye Ukudityaniswa kweWindows ngaphandle komthungo kunye neMacOS Big Sur, ukwandisa imveliso.
Ngokweemvavanyo, kuye kwafika I-30% ngokukhawuleza kunenguqulo yangaphambili esetyenziswe kwiiprosesa ze-Intel, kodwa kuyafuneka ukuba uthathele ingqalelo olu phuculo lulandelayo:
Iipesenti ezingama-250 ngaphantsi kwamandla asetyenzisiweyo: Kwi-Mac ene-Apple M1 chip, i-Parallels Desktop 16.5 isebenzisa amaxesha angama-2,5 ngaphantsi kwamandla kune-Intel Intel esekwe kwi-MacBook Air yango-2020.
Ukufikelela kwiipesenti ezingama-60 ukusebenza okungcono kwe-DirectX 11: Ukufana kweDesktop 16.5 eqhuba kwi-M1 Mac inikezela ngokufikelela kwiipesenti ezingama-60 ukusebenza okungcono kwe-DirectX 11 kune-Intel esekwe kwi-MacBook Pro eneRadeon Pro 555X GPU.
Ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-30 zokusebenza komatshini okungcono (Windows): Ukubaleka Windows 10 umatshini oqinisekileyo kwi-ARM Insider Preview kwiDesktop Desktop 16.5 kwi-M1 Mac yenza ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-30 ngcono kune Windows 10 umatshini obalekayo osebenza kwi-Intel-based MacBook Pro ene-Intel Core i9 processor.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Ukufana 16.5 sele ixhasa iApple Silicon kwaye ikhawuleza kakhulu
Kwa-Apple babhiyozela uSuku loMhlaba ngokunikela nge- $ 1 ngentengo nganye ngeApple Pay
"Ukuqala okutsha" yintengiso entsha yeApple yeeMacs